China 3 Ply Disposable echebe nkpuchi ụlọ ọrụ na-emepụta | Gubang
Ihe nkpuchi a na-enweghị ahụike na-enyere aka inyocha dịkarịa ala 95% nke nje na ọrịa. Pụrụ iche 3 ply na-abụghị kpara imewe na-enye nchebe megide ájá na PM 2.5, ụgbọala kpochapu, pollen, bateria, droplet, wdg Soft, mma, odorless, kwesịrị ekwesị maka mwute akpụkpọ, ìhè arọ, mfe na-eku ume site na. Non Medical 3ply Disposable Protective Mask Typedị: ihe nkpuchi nwere ike ịgbanye: 3-ply ntị loop Agba: acha anụnụ anụnụ / pink / ọcha Akwụkwọ: OA akwụkwọ Akụkụ: Nke a na-abụghị ọgwụgwọ 3-ply mask na-enyere aka nyochaa ma ọ dịkarịa ala 95% nke nje na ọrịa. Ihe na-egbu ume, nke na-eme ka ọ baa uru na ejiji. Pụrụ iche 3 ply na-abụghị kpara imewe na-enye nchebe megide ájá na PM 2.5, ụgbọala na-ekpochapu, pollen, nje virus, nje bacteria, droplet, wdg. Ejiri ihe eji eme gburugburu ebe obibi, ihe akaebe nke mmiri, nke na-adịghị egbu egbu, nke na-adịghị ewe iwe, dị nro na nke ọma. Zuru okè maka ahụike, ntu orlọ Mmanya ma ọ bụ mpaghara ọ bụla ọzọ ebe enwere ike ịchọ nchekwa, dị ka ụlọ ọgwụ, ụgbọ elu, wdg. Ihe nkpuchi ịwa ahụ nwere mkpịsị akwara awara nke 3 bụ nke ihe atọ na-enweghị ihe ọ bụla kpara, ọ dị mma ma dịkwa mma maka gị iji. Nzube zuru oke, mgbe ị na-eyi ya, ọ na-adaba adaba na ihu gị. Mkpịsị aka na-agbanwe agbanwe dị mfe iyi na enweghị nrụgide na ntị. Atọ atọ nke ọcha uzuzu, gas na-egbu egbu na ikuku, na akwa nhicha anụ ahụ, na-enye gị ọtụtụ nchebe, na-echebe pụọ na uzuzu, allergens na contaminants.
Aha ngwaahịa Disposable ihu nkpuchi
Model Nke 001-Ntị ntị
Nha 175mmx95mm (± 5mm)
Single ngwaahịa ibu 3.05g （± 0.2g）
ngwugwu 50pcs / igbe 2000pcs / katọn
Mbukota nkọwa 195x100x80mm
Akụ, ihe Non - kpara akwa, gbazee-fụọ ákwà Nylonrope, aluminum warara
AKWPKWỌ AKW ANKWỌ AKWIVKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ Maka ndị okenye - Nwee ahụ ike ma nwee nchedo mgbe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-apụ ma na-eyiri otu n'ime nkpuchi ihu anyị nwere ike iwepụ Idebe gị pụọ na ndị na-emetọ ihe na ihe ndị na-emetụta ahụ ike, dịkwa oke mma maka ụmụ ahụhụ na-anabata anụ ụlọ. Layerszọ atọ nke nchebe na-enyere gị aka ime ka ume ọ bụla dị ọcha, debe ihe na-adịghị ọcha dịka o kwere mee.
NKR SP AKPANKỌ - Earloop na-agbanwe agbanwe, mmechi ntị dị nro na-ewepụ nrụgide na ntị. A na-eji anụ ahụ dị nro mee ka akwa ahụ dị n'ime, ọ bụghị ihe eji esiji ákwà, na-adị nwayọọ n'ahụ. Okpokoro 3-oyi akwa.
Ihe nkpuchi nwere ike iji okpukpu atọ nwere ike inyere gị aka igbochi nnyefe nke microorganisms pere mpe site na ụmụ irighiri mmiri, ịgba, splat, na splashes. Ihe nkpuchi ahụ nwekwara ike belata ohere nke ihu na ihu.
SIZE FITS Kachasị - Ihe nkpuchi ihu a dabara adaba maka ndị okenye na ụmụaka na-eme ka ha dịrị mma idobe n'ụlọ gị ma ọ bụrụ na enwere ọnọdụ mberede.
Kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ oge - ihu igwe na-adịghị mma, Fog na haze, Hospitallọ Ọgwụ, Oge mmiri, Uzo ihu igwe, Igwe ihu igwe, Ebe a na-ewu ụlọ wdg. Onye ọrụ, Ọcha, Onye Nrụpụta, Dọkịta, Mmụta. Ọmarịcha ájá dị n'èzí, oké ìgwè mmadụ, njem ịgba ígwè, ndụ kwa ụbọchị na ebe ndị ọzọ.
Disposable Non-kpara 3 Layer Ply Myọcha Nkpuchi ọnụ Nkpuchi nkpuchi ihu igwe
1. Ejiri ihe eji eme gburugburu ebe obibi, ihe mkpuchi mmiri, nke na-adịghị egbu egbu, nke na-adịghị ewe iwe, dị nro ma dị mma.
2. Ihe na-egbu ume na usoro mara mma, nke mere ka o baa uru na ejiji.
3. Pụrụ iche 3 ply na-abụghị kpara imewe, na-enye nchebe megide ájá, ụgbọala na-ekpochapu, pollen, wdg.
4. Nzube zuru oke, mgbe ị na-eyi ya, ọ na-adaba adaba na ihu gị. Mkpịsị aka na-agbanwe agbanwe dị mfe iyi na enweghị nrụgide na ntị.
5. Zuru oke maka ụlọ ntu ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ ebe nchekwa nwere ike ịchọrọ, ụgbọ elu, wdg.
Nke gara aga: Ihu mkpuchi KS-9005
Osote: KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Isi-n'ịnyịnya)
Ihe nkpuchi ihu nke China
Disposable KN95 nkpuchi
Disposable nchebe nkpuchi
Disposable echebe ọdịdị ihu
KS-9008 Standard CE FFP2 NR (Na mbukota ...